केरलाबाट केही त सिकौं!
स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने हो भने भारतको केरला, श्रीलंका, रुवान्डा र थाइल्यान्डको अनुभवबाट हामी थुप्रै कुरा सिक्न सक्छौं।
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्र ब्याङ्क र प्रहरी सङ्गठनमा गर्नै नहुने हस्तक्षेप गरेको देउवा सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन, एमसीसी अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचन आदिमा भने प्रशंसनीय काम गरेको छ।
बजेट: विना अध्ययनको उडान
पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान विना नागरिकलाई ठूला ठूला सपना देखाउने महत्त्वाकाङ्क्षी र ठूला कार्यक्रम घोषणा गरिनु नेपालको बजेटको समस्या बनिरहेको छ।
उपचार माग्दा उपेक्षा अपाङ्गता भएकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुग्न पाइला पाइलामा बाधा छन् जसलाई सरकारले तोकेका केही सहुलियतले तोड्न सकेको छैन।
बाढीले बिथोल्दै बिहारमा मनसुनी विवाह भारतको सबैभन्दा बाढीग्रस्त राज्य बिहारमा बाढीले बिहे बिथोल्न थालेपछि रद्द गर्नुभन्दा बेहुलाहरू डुङ्गा वा ट्याक्टरमा चढेर भए पनि बरियाँतमा जान बाध्य भएका छन्। यस्तो नयाँ अभ्यासबाट केही जोखिम तथा सांस्कृतिक क्षति पनि भएको छ।
एसपीपीको कसीमा नेपाल सरकार र नेपाली सेना असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा जोड्ने न्याशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा गल्तीमाथि गल्ती गरेका राजनीतिक र सैनिक नेतृत्व दुवैले भविष्यमा यस्तो हुन नदिन निकै चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता विषयमा नागरिक समाज र मिडियाको पनि निगरानी नपुगेको देखियो।
मल नहुँदा रोकिंदै रोपाइँ, बेर्ना सुक्ने चिन्ता बेर्ना हुर्किएको भए पनि मलको अभावमा किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा किन्न पाइएको छैन भने भारतबाट ल्याउन नेपाली सुरक्षाकर्मीले नै नदिएको किसानको गुनासो छ।
हिसाब, खाता र ताल्चा “बूढा, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गर्न थालेको दिनदेखि हाम्रो घरबाट ताल्चा हराउन थालेको छ। के यो संयोग हो?”
कुरो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र त्यसको लिपिको अहिलेसम्म जति गल्ती भयो, भयो। त्यत्तिमै रोकौं। यो कार्य अहिलेका लागि स्थगित गर्दा जति रकमको नोक्सानी हुन्छ भनिएको छ, सरकारले यसलाई अगाडि बढाएर पछि रोक्न बाध्य हुँदा हाम्रो मुलुकले झन् धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ अबका मानिसमा नेतृत्व र नीतिलाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिएको छ। यही दृष्टिकोणले दृश्य फेरेको छ। यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ।
यी हुन् चर्चामा नआएकी कबड्डी–४ की पम्फा बेलायतको नेपाली समुदायकी ‘पब्लिक फिगर’ गौमाया गुरुङ पछिल्लो समय ट्राभल–भ्लग बनाएर नेपाली भाषा, संस्कृति र जनजीवनसँग सम्बन्ध गाँसिरहेकी छन्।
किन कामचोर हुन्छन् सरकारी कर्मचारी? राजनीतिक संरक्षणको आधारमा कम क्षमता भएका कर्मचारीको बोलवाला हुन्छ। जसका कारण उसले त काम गर्दैन नै, क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित हुनेहरू हात बाँधेर बस्छन्। फलस्वरूप कार्यालय काम गर्नेभन्दा पनि दिन कटाउने ठाउँ हुन जान्छ।
बजेटले अन्योल नीति प्रतिष्ठानको भविष्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न’ प्रतिष्ठान र समिति खारेज गर्ने घोषणा गरिएसँगै भर्खरै पाइला चाल्दै गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भविष्य अन्योल बनेको छ।
कहाँबाट आयो यो मान्छे! २०७६ सालको उपनिर्वाचनमा ४२२ भोट ल्याएपछि उनको जमानत जफत भयो। हार नमान्ने हर्कलाई जमानत जफतले हल्लाउन सकेन।
नेपालकै गरीब क्षेत्रको खाद्य सङ्कटलाई झन् गहिर्‍याउँदै छ जलवायु परिवर्तनले
कुपोषण र बाल मृत्युदर उच्च रहेको पश्चिम नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई जलवायु विपद्ले खलबल्याइरहेको छ।
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी‚ फाइदा कि बेफाइदा?
एकथरी मानिस निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार भई सेवाको पहुँचमा व्यापकता आएको तर्क प्रस्तुत गर्छन्। अर्काथरि‚ स्वास्थ्य सेवा महँगो भएर आम मानिसको पहुँचबाहिर पुग्न थालेको तर्क प्रस्तुत गर्छन्।
प्रश्न हराउँदै गएको पत्रकारिता
हामीकहाँ पत्रकारले राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बन्दा वा चुनावै लड्दा पनि पत्रकारिता छोड्दैन। अनि उही स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताबारे धाराप्रवाह प्रवचन दिइरहेको हुन्छ। हामी तिनलाई किन प्रश्न गर्दैनौं?
विशिष्टीकृत सेवालाई बेवास्ता सरकारले विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सकको दरबन्दी नखुलाउँदा यस्तो सेवा दिने अधिकांश चिकित्सक निजी अस्पतालमा काम गर्न वा विदेशिन बाध्य छन्। जसका कारण, आम नागरिकले जटिल रोगको उपचार पाउनै कठिन छ।
जित्नैपर्ने चुनावी प्रतिस्पर्धाले कमजोर बन्दै लोकतन्त्र लोकतन्त्र कुन तहको परिपक्वतामा पुग्यो भनेर मापन गर्ने आधार हो, निर्वाचन। तर, स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा आइरहेका समाचारले झण्डै आठ दशक लामो नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास कमजोर मात्र होइन, विकृत बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ।
सुनचाँदी विलासी वस्तु होइन नेपालका प्रायः सबै समुदायका व्यक्ति सुनचाँदीको उपभोक्ता हुन्। यत्रो ठूलो जनसङ्ख्या उपभोक्ता भएको सुनचाँदी कसरी विलासिताको वस्तु हुन सक्छ? यो कच्चा पदार्थ हो।
हेटौंडाको मेयरमा पुराना सहकर्मीको प्रतिस्पर्धा बागमतीको सदरमुकाम हेटौंडा उपमहानगरको मेयरमा १८ उम्मेदवार भए पनि दुई जना पुराना सहकर्मीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
चुनावमा विपक्षीको खेदो खन्ने मञ्च सामाजिक सञ्जाल मधेशमा प्रतिस्पर्धी नेताका तस्वीर बिगारेर ‘पोस्ट’ गर्नुका साथै निराधार आरोप लगाएर तेजोवध गर्नु नियमित चुनावी रणनीति बनिरहेको छ।
ब्युँतिए भक्तपुरका ऐतिहासिक पोखरी पोखरी संरक्षण योजना मार्फत भक्तपुर नगरपालिकाले बेवारिसे पोखरीलाई पुनर्जीवन दिएको छ ।
कस्तो स्थानीय सरकार, कस्तो स्थानीय नेतृत्व? चुनाव पाँचवर्षे हाट वा भाषण-जुक्तिको मेला होइन, स्थानीय कार्यसूची निर्माण र अनुमोदनको आधार हो। त्यसैले भावनाको बहकाउ, आस्थाको विभाजन, आग्रह र प्रभावबाट अलग रहेर आफ्नै भविष्य निर्माणको प्रक्रिया हो भन्ने मतदाताहरूले बुझ्नुपर्छ।
भरतपुर मतपत्र विवादबारे देवी ज्ञवाली भन्छन्- मैले त आफूलाई सम्हालें, अरूलाई यस्तो नहोस् रेणु दाहाललाई देवी ज्ञवालीको जवाफ, “त्यो दुर्घटना थिएन। एकदमै सुनियोजित, षड्यन्त्रकारी र अपराधपूर्ण क्रियाकलाप थियो। आकस्मिक दुर्घटना हुँदै होइन।”
नेपालमा तौर्यत्रिक नाट्य-संगीतका आवरणमा बाहिरी देशबाट कलाकार झिकाएर गरिने रसरङ्गले देशको भेद खुल्ने भन्दै पृथ्वीनारायण शाहले यस्ता कामलाई आफ्नो पालामा विराम दिन खोजे पनि उनको नीतिको अनुसरण उनकै सन्ततिले गरेनन्।
सामाजिक सञ्जाल-शासनको सामना गलत सूचना मार्फत सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अतिरञ्जना र ध्रुवीकरणले मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक संरचना विखण्डित बनाउँछ।
सामाजिक सञ्जालको भुलभुलैया वास्तविक दुनियाँबाट टाढिंदै सामाजिक सञ्जालभित्रको गोलचक्करमा फसिरहेका प्रयोगकर्ताले खासमा मिडियाले आफूलाई प्रयोग गरिरहेको पाटो सोच्ने समय नै पाएका छैनन्।
एकीकृत बस्तीले दिन नसकेको ओत गोरखा लाप्राकका भूकम्पपीडितका लागि निर्मित गुप्सीपाखा एकीकृत बस्तीले पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, भौगोलिक परिवेश र आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।